ANNUAL GENERAL MEETING - Burmese Buddhist Society,B.C
posted Jan 28, 2015, 9:09 AM by Ven Ghosaka [ updated Apr 4, 2015, 7:50 PM ]
posted Aug 15, 2014, 6:11 PM by Ven Ghosaka [ updated Oct 13, 2015, 9:06 AM ]
The Burmese Buddhist Society, BC (BBS, B.C) cordially invites you and yours to attendaMyanmar Food Fair event fundraising to educate together our youths and Respect together our Seniors Program.
The BBS, BC is non-profit charitable organization; we will issue official TAX receipts all fundraisers.
This Food Fair event will sell various of Myanmar Traditional Food.
Guests will enjoy on intimate outdoors gathering on the back lawn of Temple the end of Vancouver Summer.
In addition, guests will be invited to take part toasupport our Youths and Seniors Program.
Where * Buddharamsi Temple, Richmond
11:00- am - to 2:00pm
Greet and Meet old and new friends the end of Vancouver summer at Myanmar Food Fair event.
posted Jul 8, 2013, 10:38 PM by Ven Ghosaka [ updated Jul 8, 2013, 10:47 PM ]
မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းကြီးသည် ပြီးခဲ့တဲ့ ဂျွန်လက လေးနှစ်တာ သက်တမ်းပြည့်ခဲ့ပါပြီ။ စာရေးသူနှင့်တကွ ဗန်ကူးဘားရှိ မြန်မာမိသားစုများ တတတ်တအား စုပေါင်း၍ တည်ထောင်သော အသင်းကြီးမှာ Surrey ၌ အိမ်းတစ်လုံးငှား၍ ဘုန်းကြီးကျောင်းအဖြစ် ၅-လကြာသီတင်း သုံးခဲ့ရပါသည်။ ထို့နောက် အားလုံးပါဝင်၍ ကျောင်းနေရာ ရရှိရေးကို ရှာဖွေ့ရာ လေးလအတွင်း ယခု သတင်းသုံးနေသော ဗုဒ္ဓရံသီဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းနေရာကို ရရှိခဲ့ပါသည်။
ထိုကျောင်းနေရာကို စေတနာရှင်ဖြစ်သော ကိုတင်နွယ်+ မလေးလေးနွယ်မိသားစုမှ တစ်ဦးတည်း လက်မှတ်ထိုး၍ အားမခံကာ ကျောင်းအဖြစ် ဝယ်ယူ လှူးဒါန်းခဲ့ပြီး ၂၀၀၉-ခုနှစ် နိုဝင်္ဘာလ (၈) ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာ့သာသာနာပြု ပီနန်ဆရာတော်နှင့်
ကျေးဇူးရှင်ထိုင်ဝမ်ဆရာတော်တို့က ဤကျောင်းတော်ကြီးကို အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။။ ထို့နောက် ဗန်ကူးဘားရောက် မြန်မာမိသားစုများမှ တတ်စွမ်းသမျှ ငွေအား၊လူအား၊ ကူညီပန့်ပို့လှူဒါန်းကြလို့ အသင်းကြီးနှင့်ကျောင်းတော် ကြီးသက်တမ်းမှာ လေးနှစ်ကာလအထိ အခက်အခဲမရှိလျှောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ပြည်ပတိုင်းပြည်၌ ကမ်းမမြင် လမ်းမမြင်ပဲ စမ်းတဝါးဝါး လျှောက်လှမ်းလာသော လမ်းခရီးမှာ ခရီးတော်တော်ပေါက်လာပြီး သေးငယ်သောအရာမှထိးထိးမားမား အကောင်အထည်ပေါ်လာပြီးဖြစ်လို့
မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းကြီးအနာဂတ်မှာ ကြည်နှုးအားရ ဝမ်းသာရမည်မှာ
အသင်းကြီး၏ ဘာသာရေး၊သာသနာရေးဆောင်ရွက်ချက်များမှာလည်း ၄-နှစ်တာအတွင်း တော်တော် ခရီးပေါက်ခဲ့ပါပြီ။ မျိုးဆက်သစ်များအတွက် ရဟန်းခံ၊ရှင်ပြုပွဲတော်များ၊
ဝါဆိုသင်္ကန်း၊ ကထိန်သင်္ကန်းကပ်ပွဲတော်များ၊ အသံမစဲမဟာပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲများ၊ ဘိုးဘွားပူဇော်ပွဲများ။ မျိုးဆက်သစ်များအတွက် မြန်မာစာသင်တန်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းများ၊ လူကြီးများအတွက် အဘိဓမ္မာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အခါအားလျှော်စွာ မြန်မာပြည်မှ ဆရာတော်များကိုလည်း ပင့်ဖိတ်ကာ တရားပွဲများကျင်းပပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ခုလောလောဆယ်.. ဤကျောင်းတော်ကြီးကို ကိုတင်နွယ်+မလေးလေးနွယ်မိသားစုမှ အာမခံလတ်မှတ်ထိုး၍ ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြစ်နေသောကြောင့် ဤကျောင်းတော်ကြီးကို အသင်းပိုင်ဖြစ်အောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ရန်ရှိပါသည်။
ဤဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်း ကျွမ်းကျင်သော မောဂိတ်၊ ပညာရှင်များ အားဖိတ်ခေါ်၍ အကြံအဥာဏ် တောင်းခံအပ်ပါသည်။ ဤကျောင်းတော်ကြီးဝယ်စဉ်က ဒေါ်လာငါးသိန်းကျော်သာ ပေးရ၍ ယခုလက်ရှိပေါက်ဈေးမှာ ရှစ်သိန်းကျော်ပေါက်နေသောကြောင့် ဘဏ်ကိုပေးဆပ်ရန်ကြွေး လေးသိန်းကျော် ကျန်ရှိနေပါသေးသည်။ ဘဏ်မှယူထားသော လုံးချေးငွေ သတ်တမ်းမှာ နောက်နှစ်ဆို
၅-နှစ်သက်တမ်းပြည့်သည်အတွက် ဘဏ်အပြောင်းအလွှဲ( သို့) အသစ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဗန်ကူဘားရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာမိသားစုများ တိုးပွားလားတာနှင့်အမျှ ကျောင်းနေရာ အကျယ်အဝန်းလည်း လူဦးရေနှင့် မျှတဖို့ အထူးလိုအပ်လာပါသည်။ သို့အတွက် အသင်းအတွက် သင့်တင့်သော အကျုယ်အဝန်းရှိသော ကျောင်းဆောင်လိုအပ်လာပါသည်။
ယခုလက်ရှိကျောင်းနေရာ မြေအကျယ်အဝန်းမှာ ၂၈၃×၆၃ ပေ ကျယ်ဝန်းသောကြောင့် အသင်းပိုင်ဖြစ်လာ ပါက သာသနာ့မြေလျှောက်ထားက လျှောက်ထားခွင်းရှိကြောင်း
သိရသည်။ အကယ်၍ ဤနေရာသည် သာသနာမြေဖြစ်ဖို့အတွက် အကျယ်အဝန်းလိုအပ်ပါက သင့်တင့်သောနေရာကို ရွေ့ပြောင်း၍ ဗန်ကူးဘား မြန်မာမိသားစုအတွက် သင့်တင့်သော အကျယ်အဝန်းရှိသော ကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင်
ဆောက်လုပ်ရန် ရည်မှန်းချက်ရှိပါသည်။ ဤရည်မှန်ချက်ကိုလည်း ဝိုင်းဝန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန် တိုက်တွန်းနိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ဤရည်မှန်းချက် အကောင်အထည်ပေါ်လာပါက ၊အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က စေတနာရှင်းများလည်း ပါဝင်လှူဒါန်းကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ နောင်အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များ အတွက်လည်း မိမိတို့၏ လူမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာအတွက် အားထားရာ ဘုရားဝတ်ပြုဆုတောင်းရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်လာမည်ဟု ယုံကြည်မိပါသည်။
အစိုးရဥပဒေအရ အသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌ၊အတွင်းရေးမှူးစသော နှစ်စဉ် အမှုဆောင်သစ်များ ရွေးချယ်တင်မြောက်ထား သော်လည်း အသင်းကြီး တိုးတက်၊စည်ပင်ရေးမှာအသင်းသားတိုင်း တာဝန်းရှိပါသည်။ သို့အတွက် အသင်းသားများအားလုံး ဤအသင်းသည် မိမိတို့ထောက်ပံ့လှူဒါန်းထားသည်ဖြစ်၍ အသင်း၏ တိုးတတ်ရေးအတွက် အသင်းသားများ အားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
အသင်းအမှူဆောင်များနှင့်လက်တွဲ၍ မိမိတို့ကျွမ်းကျင်ရာဖက်က working committee များဖွဲ့ကာ ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ။ ။ တစ်လတစ်ကြိမ် ကျောင်းသန်းရှင်းရေးအဖွဲမျိုး၊ ပွဲတော်များ ပြီးဆုံးသည်အခါ သိမ်းဆည်းရေးတာဝန်းများကို အားလုံးကူညီ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
နွေရာသီကျောင်း ပိတ်ရက်တွင် ကလေးများအတွက် သင်းတန်များဖွင့်သောကြောင့် ပညာဒါနလုပ်အားပေးများလည်း အထူးလိုအပ်ပါသည်။ ကျွမ်းကျင် ဆရာ/ဆရာမများကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ တချို့ကလေးမိဘများမှာ အလုပ်ဆင်းရ၍ မအားသောကြောင့် ကလေးကြို/ ပို့ကားများလည်း လိုအပ်ပါသည်။
ဒီနှစ်တွင် ထူးထူးခြားခြား ကလေးများအတွက် ပညာရေး အထူးဆု နှစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ စံပြကျောင်းသားဆုနှင့် အဘိဓမ္မာပြန့်ပွားရေးဆုတို့ဖြစ်သည်။ အဘိဓမ္မာပြန့်ပွားရေးဆုသည် ကလေးအတွက် ၂၀၁၅-ခုနှစ် မြန်မာပြည် ခရီးစရိတ်ငြိမ်ဖြစ်ပြီး။မိဘများအတွက်လည်း အထက်မြန်မာပြည်ခရီးစရိတ်ငြိမ်းပို့ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
အသင်းကြီးသည် အစိုးရအသိမှတ်ပြု Charitable organization ဖြစ်၍ အလှူရှင်များအား official tax receipt များထုတ်ပေးပါသည်။ သို့အတွက်ကြောင့် လက်လှမ်းမှီသလောက် အသင်းကြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အလှူငွေများကောက်ခံပေးခြင်းဖြင့်လည် အသင်းကြီး၏ တစ်ဒေါင့်တစ်နေရာက ပါဝင်ကူညီနိုင်ပါသည်။
ကျောင်းပွဲတော်များတွင်လည်း အလှူခံဋ္ဌာနတွင် အလှူခံဖြတ်ပိုင်း ဖြတ်ပေးမည့် လူလိုနေသည့်အတွက် စိတ်ဝင်စားသူများ လာရောက် ကူညီနိုင်ကြောင်း
“မိုင်းတစ်သောင်းခရီးကို ခြေတစ်လှမ်းမှ စခဲ့ရ၏” ဟူသော တရုတ်စကားပုံကဲ့သို့ အသင်းကြီး၏ ရည်မှန်းချက်များ ဘယ်လောက်ပင် ဝေးကွာနေပါစေ၊ ယုံကြည်မှုနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုများရှိပါက အသင်းကြီး၏ ရည်မှန်းချက်များ အောင်မြင်မှ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ ဧကန်ပင်ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
အသင်းသားများအားလုံး သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးပွဲဖြစ်သော July 21 တနင်္ဂနွေနေ့ကို မပျက်မကွက် တက်ရောက်ကြပါရန်လည်း လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
Burmese Buddhist Society, BC has been well-established for 4- years already now; contributed by the Canadian- Burmese Buddhist families. In the beginning of June 2009 , we rentedahouse foraplace of worship and community gathering for five months. Later we foundasuitable place foramonastery.
Fortunately we broughtahouse and land for the monastery signed byagenerous family named Ko Hla Pe and Ma Lay Lay Nwe. On November 8, we celebrate the grand opening ceremony led by Penang Saydaw U Pannnyanvumsa and Taiwan Saydaw U Nandavumsa. Venerable Sayadaw contributed the Buddha’s teaching at the monastery without difficultly, supported by Burmese –Canadian Buddhist families.
We are happy and appreciate the contribution to Buddhasasa in the Western country.
BBS.BC’s journey of aspirations and lofty achievements within the last five years isagreat joy to all of us: such as Buddhist monks and novice ordination ceremony; non-stop pathana chanting; union of waso robe offering, union of khathna robe offering; paying respect to seniors; Ddhamma school for children and Abhidhamma class for adults.
Occasionally, we have conduct special Dhamma talk led by Vipasana Sayadaw from Myanmar sponsored by BBS.BC.
Presently the building owned by Ko Hla Pe and Ma Lay Lay Nwe, will have to change ownership to BBS.BC. We are requesting the mortgage broker and realtor to help this process of changing names. .
The current assessment of the property by the City is over $ 800,000, presently we haveadebt of $ 400,000 to pay. Next year the BBS,B.C bank contract will be complete, and we can change the name or switch to the other bank.
BBS,B.C land is 283× 63 feet wide, so we can apply religion zone to City. If it is not enough for our community, we will move to another place and buildanew building. We are encouraging the community to come out for this project. If this project succeeds, we will be of help to the Buddhist Families from all over the world. The main purpose also is to turn it intoaplace of public worship in order to meet their religious obligations andaresolute Cultural Center for the new generation.
According to the Society act, we electapresident, andasecretary every year; but we all have responsibility the unity for progress in society because this society is supported by all the members.
Working with EC, everyone can do something for society such as cleaning group. You can do monthly or after celebration days.
BBS, BC opens Summer school for children every year. You can help in teaching kids and transportation if some parents are working.
This year there isaspecial prize for kids. There will be two special prizes. One will be the role model student and the other one isaspecial student in Abhidhama.
If you win the special prize in Abhidhamma, you will reward to exploreafree trip to Myanmar with your family in 2015.
BBS, BC isanon- profit charitable organization, we issue official tax receipts to every donors, so you can help the Society by collecting donations. On the day of the ceremony, you can also help asareceptionist at the reception counter for donation.
The Chinese proverb states that “A journey ofathousand miles begins withasingle step”, even though BBS, BC journey is noble and ambitious, we can achieve it one day with faith and unity working together.
Please attend the annual general meeting on July 21, 2013.